TinkerTool u Mac Review | MacArsenal
> Resource > Mac > Marcel Bresink Software-Systeme: TinkerTool u Mac
Bilowga aad, nidaamka kombiyuutarka qarin doonaa muuqaalada qaar ka mid ah oo la-ka dhisay. Upkiisa Tool ku siin karaan inaad hesho goobaha dheeraad ah doorashada iyo wax xun samayn ku saabsan nidaamka. Iyadoo design ah u baahan ma mudnaanta maamulka, qalab dhigay your computer jawi guud ahaan free-of-halis.
Activator doorashada dheeraad ah
TinkerTool waa codsi ah in kuu ogolaanayaa inaad si ay heli karaan qaar ka mid ah goob doorashada dheeraad ah Mas OS X iyo qaar ka mid ah muuqaalada dhaqaajiso maqan iyo naadir ku yahay nidaamka qalliinka. Oo aan ka werwerayn isbedel doorashada saameyn ku yeelan kartaa dadka kale ee, aad xitaa ma u baahan tahay mudnaanta maamul si aad u bilowdo korontada. Ama in la isticmaalo nolosha caadiga ah ama ujeeddo ah oo khibrad leh, upkiisa Tool shaqeyn karaan si fiican u.
Dhammaan goobaha doorashada bedelay TinkerTool oo dhan ka hor la soo celiyo dib karaa in la bixin kari Apple ee, ama gobolka jiray. TinkerTool ee howlgalka waa lacag kasta oo geedi socodka soo jeeda khatar ah, kuwaas oo hubiyo in nidaamka kombiyuutarka si buuxda u nabdoon. Tan waxay ka dhigi kartaa inaad hesho goobaha dhisay-in doorashada, TinkerTool ee la heli karo kala duwan nidaamka qalliinka version.
TinkerTool waa shareware yar kuu ogolaanaya inaad si upkiisa goobaha aad doorashada ku saabsan habka, waxay kuu ogolaanaysaa inaad hesho fursadaha qarsoon. Sida fallaadho ku daray kitaab labada daraf oo baararka kitaab, fursado aad ka heli karto ka jirin sabab gaar ah, laakiin waa la arki karin in dadka isticmaala sida goob default ah. Xoogaa gargaar ah oo aan, marnaba aad ka heli karto. Iyo in sababta TinkerTool soo baxa.
Waxa aad rabtid ee TinkerTool loo soo agaasimo ka yar 10 ciwaan: Finder, dekedda, General, Araajida, Leopard Snow, noocyada, Font yeeesha, Items Login, Safari, iyo QuickTime. Finder waxaa loogu talagalay fursadaha sida yareeyo finder ama u kashifaya files maqan. General waxaa ka mid ah wax badan oo ka mid ah fursadaha waxtar leh, oo ay ku jiraan gacanta ku qaabab file shaashada iyo fallaadho kitaab. Snow Leopard ka mid ah fursadaha loogu Mail, Barta bartamaha, iyo Goobaha.
Marka la barbar dhigo la tinkers kale, TinkerTool haysan xadeynta qaar ka mid ah ku siinaya fursado aad u badan. Laakiin fursadaha xadidan sidoo kale noqon kartaa ku kalsoonaan, sababtoo ah ma aysan ordi geedi socodka soo jeeda, darto files, ama weydiiso priviliges kasta. Iyadoo feature dib ay, TinkerTool kaa caawin kara inaad dib goob default iyo si fudud qashinka qalabka. Sidoo kale, version of this TinkerTool waa kor-u-taariikh la mid ah isbeddellada ugu dambeeyay ee OS Mac iyo codsiyada la xiriira. TinkerTool waa doorasho xor ah oo adag qof kasta oo u baahan doorashada raadraaca.